Incazelo Yokuhlola - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Qinisekisa ukuthi imikhiqizo yenkampani ihlangabezana nezidingo zamakhasimende, inikezela ngesisekelo sokuhlolwa komkhiqizo, futhi iqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo.
Leli zinga lisebenza kuyo yonke imikhiqizo yemodyuli ye-TFT ekhiqizwa yi-XX.
Umshini wokulinganisa kagesi, isibonisi sokuhlola, ingilazi yokukhulisa, isibani se-fluorescent, i-vernier caliper
Uhlelo lokusampula kanye nokuhlola izimo zemvelo
Iyunithi yokukhiqiza (noma inqubo ye-QC) yenza ukuhlolwa okugcwele kokuhlolwa kokubukeka nokuhlolwa kokusebenza kukagesi, kanye nokukalwa kosayizi noma ukuhlolwa okukhethekile, isiqeshana sokuqala semodeli ngayinye sithathwa futhi sahlolwa ama-5pcs.
Iyunithi yekhwalithi ilinganisa ama-5pcs esampula yokuqala yemodeli ngayinye, futhi isebenzisa i-GB / —2012 yokuhlola okujwayelekile isampula lesikhathi esisodwa sokuhlolwa kokubukeka, futhi izinga lokuhlola jikelele yi-II.
Izinga elingafanelekile Ileveli evumelekile （AQL） Ukuhlolwa okujwayelekile kwekhwalithi efanelekile
Ukushoda okuyinhloko Uma usayizi unephutha, 0 thola ukubuya okungu-1
Umhloli udinga ukugqoka indandatho ye-electrostatic namakhothi weminwe ayisishiyagalombili ezandleni zombili.Uma kuyi-LCD ngaphandle kwe-polarizer enamathiselwe, yonke iminwe kufanele ifake imibhede yomunwe.
Umhloli angabheka ngokubukeka noma aqhathanise netafula lokuqhathanisa ifilimu.
Sicela ubheke isampula esivivinyweni sikagesi usebenzisa isibonisi sokuhlola nesikrini sokubonisa.
Ibanga phakathi kwamehlo omhloli nomkhiqizo lingama-30 ~ 40 cm. I-engeli yokubuka yokuhlola ingama- ± 15 degrees ebusweni bangaphambili bephaneli yokubonisa mpo kanye nama- ± 45 degrees ngaphambili kobuso bephaneli yokubonisa enezingqimba (bona isithombe esingezansi)
Ukukhanyisa kwemvelo: 800 ～ 1200LUX yokuhlola okubukwayo
Izinga lokushisa kwemvelo: 25 ± 5 ℃
Umswakama: 25 ~ 75% RH
(1) Incazelo yamaphutha wephuzu adalwe ngamapaneli angaphakathi.
a) Izindawo ezigqamile: amachashazi akhanyayo, angosayizi oqhubekayo avela ku-LCD ngaphansi kwephethini elimnyama.
b) Amachashazi amnyama: ezithombeni ezihlanzekile ezibomvu, eziluhlaza, neziluhlaza okwesibhakabhaka, amachashazi amnyama anosayizi ofanayo avela ku-LCD.
c) Amaphuzu ama-2 aseduze = i-1 pair = 2 amaphuzu.
into incazelo Ubuningi obamukelekayo MAJ MIN
Amaphuzu avelele okungahleliwe N≤3 √
Amaphuzu amabili aseduze N≤0
ibanga Ubuncane bebanga phakathi kwamabala amabili akhanyayo 5mm
indawo emnyama okungahleliwe ≤4 √
Inani eliphelele lamabala amnyama nezindawo ezikhanyayo N≤6 √
ibanga Ubuncane bebanga phakathi kwamabala amabili akhanyayo (izindawo ezimnyama) 5mm √
Amaphuzu avelele amancane D≤can be ignored，<D≤, N≤4,spacing≧5mmD（Point diameter） √